အခိုးခံရလြှငျ ၊ ပစ်စညျးပြောကျလြှငျ လုပျကွညျ့ပါ – Maythadin
ပစ်စညျးပြောကျတဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ပွုလုပျရတဲ့ ယတွာနညျးတဈခု ဗဟုသုတအလို့ငှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ
ကွကျသှနျနီတဈဥကို ကနျ့လနျ့ ထကျခွမျး ခွမျးပါ။
အမွိတျထှကျတဲ့ဘကျ အခွမျးနဲ့ ပစ်စညျးပြောကျတဲ့ (ပစ်စညျးထားတဲ့) နရောကို ပှတျပေးပါ … ။ ပစ်စညျးပွနျရဖို့ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။
အောကျမှနေ ကွှပေနျးကနျပွားခံပွီး ပှတျနိုငျပါတယျ။ ပစ်စညျးပြောကျတဲ့နရောမသိရငျ ကွှပေနျးကနျပွားပျေါမှာပဲ ပှတျပွီးဆုတောငျးပါ အမွဈရှိတဲ့ဘကျ အခွမျးကို ကွှပေနျးကနျပွားပျေါအခုလိုတငျလိုကျပါ။
ကွှပေနျးကနျပွားကို ပစ်စညျးပြောကျတဲ့နရောမှာခပြါ ။ အမွဈပျေါမှာ ဖယောငျးတိုငျထှနျးပါ။ (နရောမသိရငျ အဆငျပွတေဲ့နရောမှာ ထှနျးပွီးဆုတောငျးပါ) ဘယျနေ့ ဘယျခြိနျမဆို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ … ။ ဖယောငျးတိုငျအရအေတှကျ အဆငျပွသေလို ဉာဏျရှိသလိုထှနျးနိုငျပါတယျ …. ။
ပြောကျနသေောပစ်စညျးမြား အမွနျပွနျရနိုငျကွပါစေ …
မကွာခဏ သူခိုးခိုးခံရသညျ့နရောမြား ၊ မကွာခဏပစ်စညျးပြောကျသညျ့နရောမြားတှငျလညျး ကွကျသှနျနီအခွမျးပျေါတှငျ ဖယောငျးတိုငျထှနျးပွီး ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
ပစ္စည်းပျောက်တဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ပြုလုပ်ရတဲ့ ယတြာနည်းတစ်ခု ဗဟုသုတအလို့ငှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ကြက်သွန်နီတစ်ဥကို ကန့်လန့် ထက်ခြမ်း ခြမ်းပါ။
အမြိတ်ထွက်တဲ့ဘက် အခြမ်းနဲ့ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့ (ပစ္စည်းထားတဲ့) နေရာကို ပွတ်ပေးပါ … ။ ပစ္စည်းပြန်ရဖို့ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။
အောက်မှနေ ကြွေပန်းကန်ပြားခံပြီး ပွတ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့နေရာမသိရင် ကြွေပန်းကန်ပြားပေါ်မှာပဲ ပွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ အမြစ်ရှိတဲ့ဘက် အခြမ်းကို ကြွေပန်းကန်ပြားပေါ်အခုလိုတင်လိုက်ပါ။
ကြွေပန်းကန်ပြားကို ပစ္စည်းပျောက်တဲ့နေရာမှာချပါ ။ အမြစ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပါ။ (နေရာမသိရင် အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ထွန်းပြီးဆုတောင်းပါ) ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် … ။ ဖယောင်းတိုင်အရေအတွက် အဆင်ပြေသလို ဉာဏ်ရှိသလိုထွန်းနိုင်ပါတယ် …. ။
ပျောက်နေသောပစ္စည်းများ အမြန်ပြန်ရနိုင်ကြပါစေ …
မကြာခဏ သူခိုးခိုးခံရသည့်နေရာများ ၊ မကြာခဏပစ္စည်းပျောက်သည့်နေရာများတွင်လည်း ကြက်သွန်နီအခြမ်းပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။